iPad Pro VS Microsoft oogada, isku mid laakiin aan isku mid ahayn | Wararka IPhone
iPad Pro VS Microsoft oogada, la mid ah laakiin isku mid ma aha
Wararka IPad | | Tartanka, iPad Pro
IPad Pro wuxuu u yimid inuu la tartamo Microsoft oogada. Iyaga ayaa ah laba qalab oo mudnaan leh oo ka jawaabaya isla baahiyaha isla markaana loogu talagalay isla dhagaystayaasha, kuwa doonaya ugu badnaan qaadashada laakiin leh awood ku filan oo ay ku awoodaan inay ku fuliyaan hawlo heer xirfadeed ah. Laakiin inkasta oo ay iskaga mid yihiin jiritaanka iyo xaqiiqda ah in waxqabadkoodu u muuqdo mid aad isugu eg, kala duwanaanshaha ayaa aad u muuqda., asal ahaan maxaa yeelay nidaamkaaga qalliinka waa. 'The Verge' waxay isbarbar dhigeen labada kiniiniyadood ee xirfadleyda ah iyo gabagabada ay soo saaraan ayaa aad u xiiso badan.
Labada aaladood waa kiniinno waaweyn oo loogu talagalay in loo isticmaalo kumbuyuutar iyo qoraal. Surface-ka Microsoft waxaa ku jira qalin ka mid ah qalabkiisa soo gala sanduuqa, halka qalinka Apple ay tahay in si gooni ah loo iibsado. Labada qalabba waxay leeyihiin teebabboodyo ahaan oo dheeraad ah oo ay tahay inaad iibsato, inkasta oo ay tahay daruuriga la isticmaalo. A priori leh qalabkan oo dhan labada aaladood waxay sameyn karaan waxyaabo isku mid ah, laakiin habka loo sameeyo ayaa aad ugu kala duwan midka iyo tan kale.
Isbarbardhiga waxay ku adkaysanayaan in dusha sare uu yahay laptop, halka iPad Pro uu yahay kiniin, tanina waxay ku tusaysaa nidaamyadooda hawlgalka. Microsoft Surface waxay xambaarsan tahay Windows 10, oo ah nidaam ka shaqeeya desktop oo leh cilladahiisa marka ay timaado isticmaalka aaladda oo loo isticmaalo kiniin ahaan. IPad Pro wuxuu isticmaalaa macruufka 9, taas oo macnaheedu yahay in dhamaan codsiyada loo qaabeeyey in loo isticmaalo shaashadda taabashada, sidoo kale waxaad haysataa buugga weyn ee Store Store oo la heli karo, laakiin tani waxay leedahay hoos u dhac: barnaamijyo badan oo "Pro" ah looma qorsheynin in loogu isticmaalo qalabka mobilada. Tusaalaha ugu soocida badan waa Adobe Photoshop, kaasoo oogada oogada laga heli karo nooca desktop-keeda oo buuxa, halka iPad Pro-ka uu ka yahay isla barnaamij mobile ah oo loo isticmaalo iPads "caadi ah". Faa'iido ama khasaaro? Taasi waxay ku xirnaan doontaa adeegsiga mid kasta.
Isbarbardhiggu wuxuu diiradda saarayaa qalinka dhijitaalka ah ee mid kasta oo ka mid ah labada kiniin. Qalinka Apple wuxuu u soo baxaa inuu yahay kan ku guuleystey inuu yeesho qoraal aad u badan oo dabiici ah iyo sawir iyo waliba tikniyoolajiyad diidan oo timireed oo aad ufiican, taas oo uqalmaysa inay tahay qalinka ugu wanaagsan ee dhijitaalka ah ee ay waligood isticmaaleen Qaabka loo yaqaan 'Microsoft Surface' ma xuma haba yaraatee, laakiin xoogaa ayuu uga dambeeyaa dhinacyadan. Waxa ay ku guuleysato ayaa ah xaqiiqda ah inay heysato "masixi" xagga sare, sida qalin qalin wax ku masaxa, oo ay yiraahdaan waxaa ka maqan qalinka Apple. Fiidiyowgu wuxuu naga tagayaa faahfaahin badan oo dheeraad ah oo aad u xiiso badan sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso maxaa yeelay waa u qalantaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » iPad Pro » iPad Pro VS Microsoft oogada, la mid ah laakiin isku mid ma aha
Farqiga dhabta ah ayaa ah in oogada ay ufiican tahay in kabadan kaliya warbaahinta bulshada, iMessage, ama ciyaar fudud. iPad Pro waligiis ma beddeli doono isticmaalka kombuyuutarka sida dusha oo kale u sameeyo. Tufaaxa Apple wuxuu ku khaldanyahay sheygaas
Jawaab ku sii qor Cristian Guzman Sandoval
Qofka xagjirka ah ee xagjirka ah waa kan caaya mid kale inuusan u fikirin sidiisa oo kale. Weligeen taas maanaan samayn.
IPhone 7 Plus wuxuu yeelan doonaa 3GB oo RAM ah iyo kiis aan biyuhu [RUMOR]
Apple Stores waxay tijaabisaa qalinka Apple-ka waa la xadayaa